लण्डन । खेलमा उति सारो रुचि थिएन उनको । त्यसो त युवावयमा खेलकुदबाट अछुतो रहने को नै पो होला र ? स्कुल पढ्दा पनि उति सारो उनलाई खेलले छोएन । अलिअलि सहभागिता जनाउन दौडिन्थे...
अलपत्र ह्वीलचेयर एनआरएनए युकेको सहयोगमा जाने भो नेपाल
लण्डन । अपांगतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय च्यारिटी मोटिभेसनकी ह्वीलचेयर संयोजक नाताली नेपालका पुनर्स्थापना केन्द्रमा ह्वीलचेयर प्रयोगका बारेमा बुझ्न नेपाल जान्थिन् । यसैक्रममा उनले जान्न पाइन् नेपाल स्पाइनल कर्ड स्पोर्टस् एसोसिएसनका बारेमा । स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएकाहरु...
इयूबाट नअलग्गिनुमै हित छ ब्रिटेनलाई
झण्डै साढे छ दशक पहिले कोइला र फलामको व्यापार गर्ने नाममा जन्म लिएको युरोपियन युनियनको यात्रा अहिलेसम्म आइपुग्दा २८ मुलुकहरु यसको सदस्य राष्ट्र हुन पुगेका छन् । यी २८ युरोपियन युनियन राष्ट्रहरुमा बसोबास गर्नेहरुको...
होशियार, ठगको मोहनी बोलीले फसाउला ?
मोहनी लगाउला जस्तो मीठो कुरा गरेर गोप्य सूचना हात पारी ठगी गर्ने गिरोहको नजर केही समययता युकेको नेपाली समाजमा पनि पर्न थालेको छ । यस्तो आपराधिक कार्य युके र समग्र विश्वमै कुनै नौलो होइन...
एनआरएनए युकेमा योगेन क्षेत्री एक्लिएकै हुन् त ?
समाचार टिप्पणी लण्डन । दशकअघि हो, गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्थापनाको परिकल्पना लिएर पहिलो बैठक बेलायतमै भएको थियो । नेपालीलाई जोड्न सक्ने एनआरएनए जस्तो सामाजिक संस्थाको न्वारान गर्ने तयारीले त्यो बेला बेलायतका नेपाली...
बेलायतका ३८ कलेज सदाका लागि बन्द
लन्डन । बेलायत सरकारले उसकै शब्दमा अध्यागमन नियमको परिधि नाघ्ने बेलायतस्थित ३८ कलेजको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको छ । गत २४ जुनमा बेलायती अध्यागमन मन्त्री जेम्स ब्रोकेनसायरले अंग्रेजी परीक्षाको नक्कली प्रमाणपत्र (टोइक) लिएर क्यास जारी...
एनआरएन सहमति कार्यान्वयन विवाद चुलियो:योगेन नछाड्ने, महेन्द्र लिएरै छाड्ने
लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतभित्र चक्रीय प्रणालीमा कार्यकारी अधिकार बांड्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न संरक्षक प्रा.डा. सूर्य सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको वैठक बिषय प्रवेश नै नगरी टुङ्गिएको छ । संघका अध्यक्ष योगेन क्षेत्री र सहअध्यक्ष महेन्द्र कंडेलवीच सहमति...
युकेमा नेपाली युवा दश दिनदेखि बेपत्ता, खोजीका लागि बेलायती प्रहरीले गरे अपील
लण्डन । युकेमा बिदा मनाउन आएका एक नेपाली युवा दश दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएपछि बेलायती प्रहरीको निदहराम भएको छ । प्रहरीका अनुसार बीरे भनिने २१ वर्षीय, प्रदीप गुरुङ बिदा मनाउन युकेमा आएका थिए । पछिल्लोपटक...
कोरियनसित विवाह गर्न किन लालायीत छन् नेपाली महिलाहरु ?
कोरियामा महिलाको लागि महिला नामक संस्थाकी अध्यक्ष जुनुु गुुरुङको कोरियाली नागरिकसंग विवाह गरेर आएका ९० प्रतिशत नेपाली चेलीहरु घरेलु हिंसाबाट पीडित हुने गरेको अन्तरवार्ता सुनेपछि भारतबाट एक राई थरकी युवतीले आहो विवाह गरेर कोरिया...
लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतका सहअध्यक्ष महेन्द्र कंडेलले पूर्व निर्धारित काउन्सिल बैठक स्थगित गरेका छन् । अल्डरसटमा आइतवार बसेको एनआरएनए यूके बैठकमा एकपक्षीय रुपमा बोलाइएको काउन्सिल बैठकको तीव्र विरोध भएपछि सहअध्यक्ष कंडेल...
एमआरपी पाउन कुर्नुपर्यो नौ महिना
लण्डन । ‘सेवाग्राहीलाई सस्तो छिटो र गुणस्तरीय सेवा’ भन्ने गरिए पनि लण्डनस्थित नेपाली दूताबासबाट यन्त्रले पढ्न सक्ने (एमआरपी) राहदानी पाउन एक सेवाग्राहीले पूरा नौ महिना कुर्नु परेको छ । शुक्रबार राहदानी हात परेपछि प्रफूल्लित...
एनआरएनए यूकेमा पद हानथापः क्षेत्रीको आलटालपछि कंडेल एक्लै बढे
लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ, बेलायतका सहअध्यक्ष महेन्द्र कंडेल पुरानो सहमति अनुरुप अध्यक्ष पद सम्हाल्न एक्लै अघि बढेका छन् । कार्यकारी अधिकार लिएर बसेका अध्यक्ष योगेन क्षेत्रीले ‘असाधारण एकता सम्मेलन’ को निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको...
« अघिल्ला 1 …4567 पछिल्ला »